हावामा भएको कार्बन डाइअक्साइडबाट तयार भयो संसारको पहिलो कार्बन नेगेटिभ भोड्का | Ratopati
हावामा भएको कार्बन डाइअक्साइडबाट तयार भयो संसारको पहिलो कार्बन नेगेटिभ भोड्का
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक २९, २०७६ chat_bubble_outline0
अमेरिकी स्टार्टअप कम्पनी एयर को. ने हावाबाट संसारको पहिलो कार्बन नेगेटिभ भोड्का तयार गरेको छ । कम्पनीले हावामा भएको कार्बन डाइअक्साइडलाई सोलर पावर मेसिनबाट एथेनलमा परिवर्तन गरेर उक्त भोड्का बनाएको दाबी गरेको छ । कम्पनीका सह–संस्थापक ग्रेगरी कन्सटेनिनका अनुसार भोड्काको हरेक बोतलमा ०.४ किलो कार्बन डाइअक्साइडको प्रयोग भएको छ ।
एक बोतलको मूल्य ७ हजार ४ सय रुपैयाँः
कम्पनीका अनुसार यसको स्वाद साधारण भोड्काभन्दा भिन्न छ । भोड्का साधारणतया गहुँबाट तयार गरिन्छ तर नयाँ भोड्कालाई भिन्न तरिकाले बनाएको छ । यसको निर्माणको प्रविधी निकै भिन्न छ जसले हावाबाट कार्बोनडाइअक्साइडलाई छुट्टयाउन सक्षम हुन्छ ।
कम्पनीका अनुसार सोलर पावर मसिनले हावाबाट कार्बन डाइअक्साइडलाई लिएर त्यसलाई कार्बन र अक्सीजनमा तोड्छ । दुबै तत्वलाई मेटलको उपस्थितीमा पानीमा मिसाएर भोड्का तयार गरिन्छ । कम्पनीका अनुसार यो पूर्ण रुपमा शुद्ध छ ।
एयर को. कम्पनी आफ्नो उत्पादनमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउनका लागि चर्चित छ जसले न्यूयोर्कका सिमित बार र रेष्टुरेन्टमा मात्रै आफ्नो उत्पादन आपूर्ती गर्ने गर्छ । कार्बन नेगेटिभ भोड्काको एक बोतलको मूल्य ६५ डलर अर्थात् ७ हजार ४ सय तोकेको छ । कम्पनीले सन् २०२० सम्म उत्पादनलाई मानिसहरुमाझ पुर्‍याउने तयारी गरिरहेको छ ।
कम्पनीका सह–संस्थापकले आफूहरु ग्रीन हाउस ग्यासको उत्सर्जनलाई कम गर्ने दिशामा काम गरिरहेको बताएका छन् । यसका साथै घरको सर–सफाईमा र रुम फ्रेशनरलाई पनि कार्बन डाएअक्साइडबाट तयार गर्ने योजना बनाइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
#vodka#carbon dioxide#भोड्का#कार्बन डाइअक्साइड
शिक्षिकाको ‘जुगाड’ भाइरल, सोसल मिडियामा तारिफ
डाक्टरले गरिरहे दिमागको शल्यक्रिया, वृद्धाले पकाइरहिन् पकौडा
टाल्सटायले पाएको ज्याला
लकडाउनमा १०१ किलो तौल बढ्योः खुकुलो भएपछि हिँड्न सकेनन्, अस्पताल भर्ना
उल्कापिण्ड खसेपछि बनेको पोखरीको पानी एकाएक भयो गुलाबी, रहस्य सुल्झाउन जुटे वैज्ञानिक
मृत्युको १० महिनापछि आयो बाबुको यस्तो इमेल, थामिएन छोरीको आँशु